၃၁ သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းခံရမည့်အန္တရာယ်ကိုပြသထားသည် - တီဗီ
31 ပြန်တမ်း 2021 ခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းခံရ၏အန္တရာယ်အတွက်ပြသထားတယ်
31 Shows Danger Being Canceled 2021
GREY'S ANATOMY - Ò My Happy Ending En Gray Grey Sloan ဆရာ ၀ န်များသည်သူတို့၏ COVID-19 အဖြစ်မှန်ကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရပြီးအကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးခေါင်းမာသောလူနာနှင့်ဆက်ဆံသည်။ Koracick သည်မကြာသေးမီကဆေးရုံအဆင့်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး Link သည်လိင်ကုထုံးဖြင့်လုပ်ကိုင်သောအလုပ်သင်များအားတာဝန်ယူသည်။ အခြားနေရာများတွင်မဂ္ဂီသည် Winston ၏ virtual ရှိနေခြင်းအားဖြင့် Grey ခန္ဓာဗေဒ၊ Thurseday, NOV ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တွင်နှစ်သိမ့်မှုတွေ့ရသည်။ ABC ရုပ်သံပေါ် 19 (9: 00-10: 01 p.m. EST) ။ (ABC) Ellen POMPEO
နှစ်သစ်ကူးအကြို ၂၀၂၀ တွင်ကြည့်ရှုရန်စုံလင်သော Netflix ရုပ်ရှင် ၅ ခု Sabrina ၏ Chilling Adventures ကိုဖျက်သိမ်းပါသလား။
ကွန်ယက်: The CW
ရာသီအရေအတွက် - ၂၀၂၁ မှာပြသမည့်ရာသီ (၃) ရာသီ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ရသည်: ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း CW စီးရီးများသည်ပထမရာသီနှင့်ရာသီ ၂ ကြားအဓိကတိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် မြစ်ကြီးနား။ ကံမကောင်းစွာပဲ Roswell, နယူးမက္ကစီကို ကြည့်ရှုသူများနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ရာသီအလိုက်ရာသီ ၂ တွင်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကိုမြင်တွေ့ရခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်။ ရာသီဥတုသည်နွေရာသီအထိရောက်ရှိမည်မဟုတ်သည့်ပြပွဲ၏လာမည့်တတိယရာသီကိုနှောင့်နှေးစေသည်ဟုမဆိုလိုပါ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ၏အနာဂတ် Rosewell, နယူးမက္ကစီကို ဖွယ်ရှိပြပွဲရဲ့တတိယရာသီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအပေါ်အကြီးအကျယ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်တိုးတက်မှုလက္ခဏာများပြသပါက CW သည်စတုတ္ထရာသီနှင့်အတူပြသမှုကိုလက်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းအရေအတွက်သည်ဆက်လက်ကျဆင်းသွားပါကရာသီသုံးခုသည်နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံအကြွေး - Hallmark Channel၊ Crown Media Press မှရရှိသော Shane Mahood Image
ရာသီအရေအတွက် - ရာသီ (၇) ရက်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ရသနည်း: စဉ်တွင် ကောင်းသောစုန်းမ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက်ထုတ်ဝေမှုမှစတင်ကာ ၁၂ နှစ်တာကာလအတွင်း ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ကောင်းသောစုန်းမ အဆိုပါဂိမ်းပေါ်သွားပြီအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပေးထားသော 2008 ခုနှစ်, ကအဆုံးသတ်ရက်စွဲအလျင်အမြန်ချဉ်းကပ်နိုင်ယူဆ - ကသာသဘာဝပါပဲ - နှင့်၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များပြီးခဲ့သည့်ရာသီ ထိုနေ့ရက်သည်မကြာမီလာတော့မည်ဟုထင်ရပုံရသည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကကျဆင်းသွားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ရှင်းပါသည် ကောင်းသောစုန်းမ ပရိသတ်များအကြားတွင်ခိုင်မာသောသော့ချက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအမှတ်တံဆိပ်သည် ဆက်လက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်နေပုံရသည်။ ကြယ်ပွင့်ကက်သရင်းဘဲလ်က Cassie Nightingale အနေဖြင့်အseason္ဌမရာသီကိုလုံခြုံစွာစီမံနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးသကဲ့သို့၊
ဓာတ်ပုံ။ Penn Badgley in You ရာသီ ၂ .. ခရက်ဒစ် - ဗက်ဒူဘာ / Netflix
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ရသနည်း: breakout series တွေထဲရောက်ရင် မင်း အဲဒါကိုသက်တမ်းတိုးဘို့ standout ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလုပ်သင့်သော Netflix ရဲ့ထိပ်တန်းစီးရီး၏တ ဦး တည်းဖြစ်လာသည်။ သို့သော်များစွာသောတူညီသောလူကြိုက်များသောစီးရီးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း Netflix သည်မည်သည့်အခါကမျှကြောက်လန့်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ ပရိတ်သတ်တွေက adored တစ်စီးရီးဖျက်သိမ်း အနည်းငယ်ဇာတ်ညွှန်းများမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစတုတ္ထရာသီကအောင်အတူ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့် Netflix ကအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်တောင်မှယုံကြည်မှုရှိတယ် မင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းခြင်းသည်နောက်ဆုံးရာသီအမိန့်ပုံစံဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်တစ်ခု:မစ္စတာ Iglesias, နောက်ထပ်ဘဝ, Dirty ယောဟနျ
Stranger အရာများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသည့် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံအကြွေး - Netflix
ရုပ်မြင်သံကြားပရိသတ်များအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးပြပွဲများကဲ့သို့ဝါကျတွင်အသုံးပြုသောအထူးသဖြင့်ဖျက်သိမ်းလိုက်သောစကားလုံးထက် ပို၍ မုန်းပါသည်။ သင်တစ် ဦး ပြပွဲများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါ, သငျသညျအစဉ်အမြဲပိုပြီးရာသီမျှော်လင့်ချက်နှင့်ပြပွဲအဆုံးသတ်အချိန်ရောက်လာသောအခါပြပွဲသည်မြည်းကြိုးကိုဖြည်ချည်နှောင်ရန်သင့်လျော်သောနောက်ဆုံးရာသီနှင့်အတူ၎င်း၏သက်တမ်းအပေါ်အဆုံးသတ်အနည်းဆုံးအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိကြောင်း။
ပုံမှန်နှစ်တွင်, ဖျက်သိမ်းခြင်း၏အန္တရာယ်အတွက်ပြပွဲပုံမှန်အားဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသည်။ သို့သော် ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီသည်ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ပါ။
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကပ်ရောဂါကြောင့်ပြပွဲများစွာတွင်ထုတ်လုပ်မှုနှောင့်နှေးခဲ့ပြီးအချို့သောစီးရီးများအတွက်အလွန်အမင်းအတားအဆီးဖြစ်သည့်ထိတ်လန့်စရာဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, 2021 ခုနှစ်တွင်တံခါးကိုပြသခံရဖို့အန္တရာယ်အတွက်ပြပွဲများ၏စာရင်းပုံမှန်အတိုင်းထက်သာ။ ကြီးမြတ်အသစ်နှင့်ဝါရင့်စီးရီးနှစ်ခုလုံးကိုရောနှောပါရှိပါတယ်။
နှစ်သစ်သို့ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်စဉ်တွင် Netflix ပြပွဲများစွာသည် (မူရင်းနှင့် Netflix streaming အကြိုက်ဆုံးနှစ်ခုလုံး) ဖျက်သိမ်းခံရမည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကံကြမ္မာမရှင်းလင်းသေးသောဤ ၃၀ Netflix ပွဲများအပါအ ၀ င်။
Grey က & # 8217s ခန္ဓာဗေဒ & # 8211 ABC ရုပ်သံ
Grey က & # 8217s ခန္ဓာဗေဒ
ကွန်ယက်: ABC ရုပ်သံ
ရာသီအရေအတွက် - ၁၇
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - ရှင်းရှင်းလင်းလင်း & # 8217s နေချိန်မှာ ABC ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ကျင်းပရန်ကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည် & # 8217ve ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချိန်နှင့်အချိန်လုပ်သောကြောင့် & # 8212 သူတို့ & # 8217ll နေသမျှကာလပတ်လုံး Ellen Pompeo နှင့် Shonda Rhimes နှစ် ဦး စလုံးဆက်လက်ချင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအဲဒီလိုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် & # 8212 ပြပွဲ။ အဖြစ် Pompeo က Variety ကိုပြောခဲ့တယ် , & # 8220 ယခုကျွန်ုပ်၏စာချုပ်၏နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ & # 8221
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ABC & # 8217s တွင်သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးသော primetime ဒရာမာအဖြစ်ရှိနေသော်လည်း Grey & # 8217s ခန္ဓာဗေဒသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်ဆက်လက်လွှမ်းမိုးနေသည်။ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီ၏ပထမသီတင်းပတ်များအတွင်း Grey & # 8217s ခန္ဓာဗေဒသည် ABC & # 8217s ၏အဆင့်အမြင့်ဆုံးစီးရီးအဖြစ်သာမက၎င်း၏အများဆုံးကြည့်သည့်စီးရီးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ရှင်းနေသည်မှာပရိတ်သတ်များသည်သက်တမ်းတိုးရန်မစဉ်းစားသင့်သောဆေးစီးရီးများအလုံအလောက်ရရှိနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
Pompeo ကစာချုပ်အသစ်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်မဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ခံစားချက်ရှိသည် မီးခိုးရောင် & # 8217s အနည်းဆုံးနောက်ထပ်ရာသီပြန်ရလိမ့်မည်
MY BLOCK & # 8211 ခရက်ဒစ်: Kevin Estrada / Netflix
ရာသီအရေအတွက် - သုံး
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - Netflix ကကောက်ယူသည်ဟုထင်ကြေးရှိသော်လည်း ငါ၏အပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ် စတုတ္ထရာသီအတွက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မတ်လတွင်ရာသီဥတုအခြေအနေ ၃ ကျဆင်းနေသော်လည်းတရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပေး ငါ၏အပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ် ပြီးခဲ့သည့်ရာသီများ၌ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ရရှိခြင်းခံခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပြသခဲ့သည့်အတိုင်းပြပွဲ & # 8217s အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းမြင်သည်။ အလင်းရောင် ဒီဝေဒနာရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပြီဆိုတာကိုဘာကိုမျှော်လင့်ရမှန်းသင်ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူး။
ရာသီ ၂ ရက် CW & # 8212 ဓာတ်ပုံ - Colin Bentley / The CW & # 8212 & 2020 The CW Network, LLC မိတ္တူကူးပါ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ရာသီအရေအတွက် - ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်၊
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: နှစ်သက်မိပြီး The CW & # 8217s စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်ပင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်အကြီးမားဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမရှိခဲ့ပါ။ ဒါဟာပြပွဲနှင့်အတူဒရာမာများကဝိုင်းခံရဖို့ဆက်လက်ကိုလည်း 8217t အထောက်အကူမထားဘူး & မူရင်းနှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရန်ငြိုးထားခြင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော & # 8217s နှစ်သက်မိပြီး ကြယ်များ ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ၎င်း၏ရုန်းကန်နေတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မူရင်းနှင့်အတူနောက်ကွယ်မှ -The- မြင်ကွင်းများဒရာမာအကြား နှစ်သက်မိပြီး CW သည်ယင်း၏အရှုံးများကိုဖြတ်တောက်ရန်နှင့်ရာသီ ၃ ကိုနောက်ဆုံးနှင့် # 8217s အဖြစ်ပြရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
သီချင်းဆိုပါ & # 8211 Netflix
ရာသီအရေအတွက် - တစ်ခု
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာတွင်ပွဲထုတ်ပြီးကတည်းကပြသခြင်းနှင့်၎င်း၏အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများမရှိခဲ့ပါ။ အခြား Netflix အဖြစ်မှန်စီးရီးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းပြပွဲဝန်းကျင်၌ဆူညံသံများများပြားလွန်းသည်မဟုတ်ပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်စက်ဝိုင်း၊ နှင့် အောင်ပြီ!
အပြီးသတ်စီရင်ချက် စီးရီး didn & # 8217t 2020 ခုနှစ်တွင် Netflix & # 8217s အခြားအဖြစ်မှန်စီးရီးအချို့အတော်လေးသလောက် buzz ဖန်တီးပုံရသည်နေစဉ်, Netflix ကလျင်မြန်စွာပြပွဲကျဆင်းနေ franchised ကြပုံရသည် သီချင်းဆိုပါ ဂျာမနီ နှင့် သီချင်းဆိုပါ စပိန် ပြပွဲ & # 8217s အနာဂတ်အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ဟန်သောတူညီသောနှစ်တွင်အားလုံး။ ဒါဟာပြပွဲသည်၎င်း၏ swan သီချင်းကိုသီဆိုခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်သည် & # 8217s ကျနော်တို့စီးရီး hasn & # 8217t ယခုအချိန်အထိ၎င်း၏နောက်ဆုံးကုလားကာခေါ်ဆိုခယူခံစားရတယ်ရှိသည်။
နောက်တစ်ခု:The Blacklist, The Haunting, မှောင်မိုက်၌
လူမည်းစာရင်း & # 8212 (ဓာတ်ပုံ - ဗာဂျီးနီးယားရှားဝုဒ် / NBC မှဓာတ်ပုံ)
ကွန်ယက်: အား NBC
ရာသီအရေအတွက် - ရှစ်
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် NBC သည်အနည်းငယ်သက်တောင့်သက်သာစွာဖြင့်၎င်း၏သက်တမ်းတိုးမှုသည်ရာသီဥတုသက်တမ်းတိုးခြင်းကို၎င်း၏ဝါရင့်စီးရီးများအပါအ ၀ င် တစ်ခုမှာချီကာဂို ဂိမ်း, ဥပဒေ & amp အမိန့်: SVU, နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒရာမာ နယူးအမ်စတာဒမ်။ အထူးသချမ်းအတွက်ထွက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည် နာမည်ပျက်စာရင်း အနိုင်နိုင် 2020-2021 ရာသီအတွက်၎င်း၏သက်တမ်းတိုး secure နိုင်ခဲ့သည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ကျဆင်းမှုအပေါ်တစ်ဖန်၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူကြောင့်ဖွယ်ရှိပုံရသည် နာမည်ပျက်စာရင်း တစ်ခါတစ်ရံတွင်မကြာခဏလေထုကိုချွတ်လက်မှတ်ထိုးပါလိမ့်မယ်။ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာမှာ၎င်း၏ swan သီချင်းသည်လက်ရှိရာသီဖြစ်ခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ် NBC သည်တိုတောင်းသောနောက်ဆုံးရာသီနှင့်လက်ဆောင်ပေးမည်လားဆိုသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
BLY Manor Cr ၏သရဲခြောက်ခြင်း။ EIKE SCHROTER / NETFLIX & 2020 ကိုကူးယူပါ
ရာသီအရေအတွက် - နှစ်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - အောင်မြင်သောရာသီ ၂ ပွဲနှင့်တတိယပွဲတွင်ပရိသတ်များအနေဖြင့်အလွန်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိသော်လည်းဖန်တီးသူ Mike Flanagan သည်သူ၏ပွဲစဉ်၏တတိယရာသီအတွက်လက်ရှိအစီအစဉ်မရှိကြောင်းမကြာသေးမီကပြောကြားခဲ့သည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် Netflix ကသူ၏ Flanagan ကိုသူ၏ရပ်တည်ချက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်စည်းရုံးနိုင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အနိုင်ရပုံရသည်၊ အနည်းဆုံးအချိန်တိုအတွင်းမှာချစ်မြတ်နိုးခြင်းဗေဒစီးရီး၏နောက်ထပ်ရာသီများကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
The Dark & ​​# 8212 & # 8220 ကျွန်ုပ်၏မာနနှင့်ရွှင်လန်းမှုနှင့် # 8221 & # 8212 ပုံနံပါတ် - ITD213b_0052r & # 8212 ပုံ (LR) - Brooke Markham သည် Jess Damon နှင့် Perry Mattfeld ကဲ့သို့ Murphy Mason နှင့် # 8212 ဓာတ်ပုံ - Brendan Adam-Zwelling / The CW & # 8212 & 2020 The CW Network, LLC မှကူးယူပါ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: စဉ်တွင် အမှောင်ထဲမှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်တတိယအကြိမ်ရာသီသက်တမ်းတိုးနိုင်မှုကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်မှာ CW & # 8217s အနိမ့်ဆုံးအဆင့်စီးရီးဖြစ်သည့် ၂၀၁၉-၂၀၁၀ ရာသီ၏အဆုံးသတ်ဖြစ်သည်။ ကေတီကီး၊ အရာကံကောင်းအဖြစ် & # 8217t wasn ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် CW သည်ကွန်ရက်များအတွင်းသက်တမ်းတိုးခြင်းနှုန်းအမြင့်ဆုံးတစ်ခုဟုလူသိများသော်လည်း အမှောင်ထဲမှာ & # 8216s အချိန်အကန့်အသတ်ရှိနိုင်သေးသည်အခြားဘာမျှမပါလျှင်စီးရီးနှုတ်ဆက်ရာသီရလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ချက်အမြဲတမ်းအမြဲရှိပါတယ်။
အနက်ရောင်ကြေးမုံရာသီ5& # 8211 အကြွေး: ဂရာဟမ် BARTHOLOMEW / Netflix
ရာသီအရေအတွက် - ငါး
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း Emmy အနိုင်ရသည့်စီးရီး၏နောက်ဆုံးအပိုင်းသည် 2019 တွင်ပြန်လည်ကျဆင်းသွားပြီး Netflix သည် ထိုအချိန်မှစ၍ အနာဂတ်ပြပွဲနှင့် # 8217s နှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ။ ဒီစီးရီးကိုကျယ်ပြန့်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာလုပ်နေတယ်လို့တံဆိပ်တပ်ထားပေမယ့် Netflix ကဒီပြပွဲကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲထားခဲ့တာပဲ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အနာဂတ်အရစ်ကျပေးဆပ်မှုကိုမဆိုပယ်ဖျက်မည်မဟုတ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ & # 8217ll သည်မကြာမီအချိန်မရွေးဆth္ဌရာသီရာသီရောက်တော့မည်မဟုတ်ချေ။
သင့်ကိုယ်သင်နှင့် # ၈၂၁၁ တွင်နေထိုင်ခြင်း Credit: Eric Liebowitz / Netflix
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အောင်မြင်စွာပွဲထွက်ခဲ့ပြီးနောက် Paul Rudd ၏ဟာသ ဦး ဆောင်မှု၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်သတင်းမျှမရှိခဲ့ပါ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ၂၀၂၀ တွင်သတင်းများမရှိသောကြောင့် Netflix သည်ဒုတိယစီးရီးအတွက်အစီအစဉ်များမရှိသောစီးရီးကိုတရား ၀ င်ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။
Cheer & # 8211 ခရက်ဒစ်: Netflix
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - များစွာသော Netflix ပြပွဲများကဲ့သို့ ပျော်ရွှင်ပါစေ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလတွင်ကျဆင်းသွားသည့်အချိန်တွင်ကမ္ဘာကြီးကိုမုန်တိုင်းထန်စေပြီးပရိသတ်များနှင့်တစ်ညတာအာရုံခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ စီးရီးသည်ယခုနှစ်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးစီးရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ပြပွဲပတျဝနျးကငျြအများအပြားအရှုပ်တော်ပုံ အရာကျော်လွှားဖို့သိပ်သက်သေပြနိုင်ဘူး။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ပြပွဲ & # 8217s စတင်ပြီးကတည်းကပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားဖွယ်ရာပေးထားသောကြောင့် & # 8217s ကျနော်တို့ & # 8217ll ၏ဒုတိယရာသီကြည့်ပါလိမ့် ပျော်ရွှင်ပါစေ Netflix ကဒုတိယရာသီအတွက်ပြသမှုကိုကောက်ယူသင့်တယ်၊
နောက်တစ်ခု:မင်းဆက်, သူစိမ်းအရာ, ဂျူလီနှင့် Phantoms
ဆိုးယုတ်သောမိထွေး & # 8221 & # 8212 ပုံနံပါတ်: DYN314a_0207b.jpg & # 8212 ပုံ - အဲလစ်ဇဘက်ဂျီလီယန်သည် Fallon အဖြစ်နှင့် # 8212 ဓာတ်ပုံ - Bob Mahoney / The CW & # 8212 & 2020 The CW Network, LLC ကိုကူးယူပါ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
ရာသီအရေအတွက် - 2021 ခုနှစ်တွင် Premiere မှလေးရာသီ 4
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - ဤလျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်ရတနာကို CW & # 8217s စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် # ၈၂၁၂ တို့ဖြင့်ပင်ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက်လျော့နည်းစေသည့်ထုထည်များကသတိမမူဘဲနေဆဲဖြစ်သည် မင်းဆက် ကွန်ယက်၏အောက်ခြေတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး၊
အပြီးသတ်စီရင်ချက် မင်းဆက် ရှည်လျားသောအလေးသာခုခံကာကွယ်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတော်လေးသစ္စာစောင့်သိတည်ဆောက်ခဲ့သည် Netflix ကိုကျေးဇူးတင်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖျော်ဖြေနေဆဲဖြစ်သည်။ CW မှပြသခြင်းကိုအဆုံးသတ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာ ၈၂၁၇ ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်နှုတ်ဆက်ရာသီအမိန့်ဖြင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းမဟုတ်ဘဲလျင်မြန်စွာဖျက်သိမ်းခြင်းကိုပြုလုပ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။
သူစိမ်း & # 8211 အကြွေး: Netflix က
ရာသီအရေအတွက် - 2021 ခုနှစ်တွင် Premiere မှလေးရာသီ4။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - စဉ်တွင် သူစိမ်းများ Netflix အတွက်အထင်ကရစီးရီးဖြစ်ခဲ့ပြီးအရာအားလုံးသည်နောက်ဆုံးတွင်အပါအဝင်အပါအဝင်အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်သည် သူစိမ်းများ ။ Netflix ကရာသီ4ပြပွဲ & # 8217s နောက်ဆုံးရာသီဖြစ်နိုင်ကြောင်းအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်ထားပြီး & # 8217s အတော်လေးဖြစ်နိုင်သမျှနောက်ဆုံးရာသီအမိန့် 2021 ခုနှစ်တွင်လာမယ့်ဖြစ်နိုင်သည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ကျနော်တို့ & # 8217 အဖြစ်နှင့်အတူသက်သေအဖြစ် သရဖူ နှင့် လူစီဖာ ဒါကြောင့် & # 8217s ပြပွဲအဆုံးသတ်စေခြင်းငှါလာသောအခါနှင့်အစဉ်အမြဲစီးရီးမှသင့်လျော်သောဇာတ်သိမ်းပေးအပေါ်ကိုကျော်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်အခါသေချာဘို့အမြဲသိရန်မလွယ်ကူပါ။ ဖြစ်နိုင်တယ် သူစိမ်းများ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် Netflix ကိုအကောင်းမြင်သူများသည်ရာသီ4နောက်ကွယ်မှပြသခြင်းကိုတိုးချဲ့ရန်ရွေးချယ်ကြလိမ့်မည်။
ဂျူလီနှင့် Phantom CR ။ ကေလီ SCHWERMAN / NETFLIX & 2020 ကူးယူ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - Netflix သည်ပြပွဲများ၏ကံကြမ္မာကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အခါများသောအားဖြင့်၎င်း၏ခြေထောက်များကိုဆွဲယူသွားသည်ဟုလူသိများသည်။ သို့သော် Netflix သည်ပထမတန်းစားစီးရီးများနှင့်အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းမရှိခြင်းအပေါ်ခြေကိုဆွဲယူသောအခါ၎င်းသည် # 8217s သည်အပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ဂျူလီနှင့် Phantoms ပြပွဲ & # 8217s အနာဂတ်အတွက်ကောင်းစွာနိဒါန်းမထင်ထားဘူး။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် Netflix ကဒုတိယရာသီအတွက်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခြင်းမပြုမီအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုခွဲထုတ်ရန်ကြိုးစားနေတာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လမ်းကြောင်းပြောင်းရန်သာရှိသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့အားသင့်မည်မဟုတ်ပါက ဂျူလီနှင့် Phantoms တ ဦး တည်း -and ပြုသော Netflix ကိုပြပွဲ၏ရှည်လျားသောစာရင်းထဲတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခု:ကျိန်စာရသော NCIS၊ Zumbo & # 039s
NCIS ။ ဓာတ်ပုံ။ Sonja Flemming / CBS & copy2020 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved ။
ရာသီအရေအတွက် - ၁၈
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - အချို့သူများက၎င်းတွင်ထည့်သွင်းရန်အရူးဟုထင်ရပေမည် NCIS ရုပ်မြင်သံကြားအားလုံးတွင်လူကြိုက်အများဆုံးစီးရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖျက်သိမ်းမှုအန္တရာယ်ရှိသည့်ပြပွဲများစာရင်းတွင်ကြယ် Mark Mark Harmon & # 8217s ၏လက်ရှိစာချုပ်သည်ရာသီဥတု ၁၈ ထက်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိကြောင်းမှတ်သားထားရမည်။ CBS မှလက်ရှိရာသီကျော်လွန်ပြီးစီးရီးများဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူး။ မရပါ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ကြိုက်တယ် မီးခိုးရောင် & # 8217s ခန္ဓာဗေဒ, Harmon သည်ပြန်လည်အမှတ်အသားပြုရန်ရွေးချယ်ခြင်းရှိမရှိအားလုံးချလိမ့်မည်။ သူသည်ရာသီ (၁၈) ရာသီကိုကောင်းမွန်သောအချိန်ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် CBS နှင့် Harmon တို့အနေဖြင့်သဘောတူညီမှုအသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုရှိသည်။ NCIS အနည်းဆုံးအခြားရာသီသို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့အလှည့်ပတ်။
Zumbo & # 8217s Just Desserts Image ကိုယဉ်ကျေး Netflix က
Zumbo & # 8217s Just Desserts
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - ကျနော်တို့ပထမနှင့်ဒုတိယရာသီအကြားသုံးနှစ်ကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည် Zumbo & # 8217s Just Desserts ကျွန်တော်တို့ဟာရာသီတွေအကြားနောက်ထပ်တိုးချဲ့ထိုးနှက်မှုတစ်ခုအတွက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​တတိယရာသီဟာအဆင်သင့်ဖြစ်မနေဆိုတာကိုတော့မရှိသေးပါဘူး။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ဒုတိယရာသီရဖို့မျှော်လင့်မထားတဲ့အားရကျေနပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် Netflix ကသုံးပုံတစ်ပုံကိုပြန်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်။
Cursed (L to R) ကက်သရင်း LANGFORD ကိုကျိန်ခြင်း Cr ၏ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀၄ တွင် NIMUE အဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ Netflix & 2020 ကူးယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: ၏အောင်မြင်မှုကိုအောက်ပါ စုန်းမ ပရိသတ်များသည် Netflix ၏နောက်တန်းအဆင့်မြင့်စိတ်ကူးယဉ်စီမံကိန်းနှင့်အတူသိုလှောင်ထားသည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည် ကျိန်ဆဲသည် ကံမကောင်းစွာပဲ, စီးရီး wasn & # 8217t ထက်နည်းကျေးဇူးတင်စကားအတော်လေးတူညီစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် နတ်သမီး ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကဲ့သို့ Netflix သည်အနာဂတ်နှင့် # 8217 အနာဂတ်အတွက်မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ကျွန်ုပ်တို့သည် Netflix ကိုပြသခြင်းအားဒုတိယရာသီပေးရန်နှင့်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့သည်အခြားရာသီနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ကိုလှည့်နိုင်မလားကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ကြပြီးအလေးသာမှုများမှာမူအဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
နောက်တစ်ခု:Lava သည်မနက်ဖြန်၏ Legends၊ Raising Dion ဖြစ်သည်
ကြမ်းပြင် LAVA CR IS ။ 2020 အာဒံ ROSE / NETFLIX & ကူးယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: Lava ကတော့ကြမ်းပြင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်ပရိသတ်များက၎င်း၏ထုတ်လွှင့်မှုနှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်လျင်မြန်စွာစီမံနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် Netflix & # 8217s တွင်နိဂုံးချုပ်ပြီးနောက်ရေဒီယိုသည်တိတ်ဆိတ်သွားသည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် Netlflix သည်ဒုတိယရာသီအတွက်အစီအစဉ်များကိုအတည်မပြုရသေးသော်လည်းစီးရီးများထုတ်လုပ်သူများကအကောင်းမြင်ပုံရသည် spinoff စိတ်ကူးများန်းကျင် floating အငယ်ပြိုင်ဘက်သည်။
မျက်မှောက်ခေတ်ပုံပြင်များနှင့် # 8212 & # 8220Swan Thong & # 8221 & # 8212 Image Number: LGN515c_0473b.jpg & # 8212 ပုံ (LR): Caity Lotz သည် Sara Lance / White Canary, Matt Ryan, Constantine၊ Olivia Swan၊ Astra၊ Dominic Purcell ကဲ့သို့သော Mick Rory / Heatwave နှင့် Nick Zano တို့ကဲ့သို့ Nate Heywood / Steel & # 8212 ဓာတ်ပုံ - Bettina Strauss / The CW & # 8212 & copy The 2020 CW Network, LLC ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ရာသီအရေအတွက် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ခြောက်ပွဲရာသီ (၆) ရာသီ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - 2020 Arrowverse မှကြင်နာမပြဘူး! ၏စီးရီးဇာတျသိမျးပြီးနောက်လပေါင်းများစွာ မြှား CW သည်ဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်နောက်ထပ် Arrowverse ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုထပ်မံအဆုံးသတ်မည့်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခြင်းအားဖြင့်ပရိသတ်များအားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ အချစ်ရယ် နှင့် အနက်ရောင် Lightning ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသစ်သောစူပါဟီးရိုးစီးရီးနှင့်အတူ Stargirl နှင့် Superman နှင့် Lois ကွန်ယက် & # 8217s အချိန်ဇယားနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်အတွက်အပိုဆောင်း DC ကို TV စီးရီးပူးပေါင်းနိုင်ဘူး မနက်ဖြန်၏ပုံပြင်များ နောက်ဆုံးကုလားကာခေါ်ဆိုရန်နောက်ထပ် Arrowverse စီးရီးဖြစ်ပါသလား။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် Arrowverse ပရိတ်သတ်တွေအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေချိန်မှာ CW ကဒီ & # 8217s အထင်ကရပွဲသုံးခုကိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာအဆုံးသတ်ဖို့ရွေးချယ်မလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ရပါတယ်။ မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိသော်လည်း Legends သည်ပူးပေါင်းမည်မဟုတ်ချေ အချစ်ရယ် နှင့် အနက်ရောင် Lightning 2021 ခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးလေးကိုယူပြီး။
Raising Dion & # 8211 Photo Credit: Netflix
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - သေချာတာပေါ့၊ Dion ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း Netflix ကမကြာသေးမီလများကသက်တမ်းတိုးခြင်းကိုအလွယ်တကူပြောင်းပြန်လုပ်နိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသခဲ့သည်အဖြစ်သို့သော်ဒုတိယရာသီအဘို့, 2020 ရဲ့ထိပ်မှာသက်တမ်းတိုးခဲ့သည် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကောင်းချီးစီးရီးလျှင် အလင်းရောင် ထုတ်လုပ်မှုနှောင့်နှေးမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးရာသီကိုတောင်မရနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 8217t ကိုကူညီသော်လည်းကြောက်ရွံ့နိုင်သည် Dion ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း ကူးစက်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောနှောင့်နှေးမှုများကြောင့်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးရန်သာအသစ်ပြန်လည် Netflix ၏ပြပွဲများ၏စာရင်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် လက်ရှိဆိုင်းဘုတ်အားလုံးက Netflix ဟာဒုတိယရာသီကိုဆက်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရှေ့ကိုဇယားဆွဲပြီးပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းကိုသာမျှော်လင့်နိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု:နိုင်ငံရေးသမား၊ ကောင်းမွန်သောမိန်းကလေးများ၊ မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်း
နိုင်ငံရေးသမား Cr ။ ၏ NETFLIX / NETFLIX & 2020 မိတ္တူ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - ရိုင်ယန်မာဖီသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အကြိုက်တွေ့မှုများနှင့်အတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့သည် အမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင်၊ အမေရိကန်ရာဇ ၀ တ်မှုပုံပြင်၊ နှင့် ဝမ်းသာပါတယ် အနည်းငယ်အမည်ကိုရန်။ သူ၏စီးရီးများတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အသံများထွက်ပေါ်စေသည့်နည်းလမ်းများရှိသည်။ သို့သော်ခြွင်းချက်များအမြဲရှိသည်။ စဉ်တွင် နိုင်ငံရေးသမား & # 8216s ၏ပထမဆုံးရာသီသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများစွာဖြစ်စေခဲ့သည်၊ ရာသီ ၂ wasn & # 8217t ကိုကောင်းစွာလက်ခံခြင်းနှင့် Netflix ကတတိယရာသီအတွက်မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုမျှကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် Netflix ကတရားဝင်သတင်းကိုကြေငြာခြင်းမရှိသော်လည်း မာဖီရာသီ3အကျင့်ကိုကျင့်အတွက်အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည် ။ ဒါက & # 8217s သတင်းကောင်း။ ဆိုးရွားလှသည့်သတင်းမှာရာသီ ၃ သည်နောက်ဆုံးပြသမည့်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး ၈၂၁၇ ပွဲဖြစ်သည်။
Good GIRLS & # 8212 Season: 1 & # 8212 ပုံ - (l-r) Retta သည် Ruby Hill၊ မယ် Whitman၊ Annie Marks၊ Christina Hendrick သည် Beth Boland နှင့် # 8212 (ဓာတ်ပုံ - Danielle Levitt / NBC)
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: လေးခု NBC အပါအဝင်မကြာသေးမီက hit ဟာသအချို့ကိုအဆုံးသတ်ရန်များအတွက်မှော်အရေအတွက်ကဖြစ်ခဲ့သည် နေရာကောင်း အရာလေးရာသီပြီးနောက် 2020 ခုနှစ်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သေချာတာပေါ့၊ ကောင်းသောမိန်းကလေးများ နည်းပညာအရအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၎င်းသည်ပြပွဲ & # 8217s အချိန်ကုန်ဆုံးတော့မည်ကိုစိုးရိမ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ ကောင်းသောမိန်းကလေးများ NBC သည်၎င်းကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကပြသခဲ့သောပရိသတ်များအားထွက်ခွာမည့်အစားနောက်ဆုံးရာသီအမိန့်ကိုပြသရန်ရွေးချယ်ဖွယ်ရှိသည်။
Netflix ၏မူလစီးရီး Family Reunion အတွက်အဓိကအနုပညာဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Netflix ၏ယဉ်ကျေး။
ရာသီအရေအတွက် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာပြသမည့်ရာသီ ၂ ရာသီ။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - သူချင်းဟာသများ၏ဖျက်သိမ်းမှုပြီးနောက် The Big Show Show နှင့် အက်ရှလေ Garcia က တစ်ယောက်ကကူညီနိုင်ပေမယ့်အနာဂတ်ကိုဂရုစိုက်ပါ မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး။ ပြပွဲနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ကြောင့်နှောင့်နှေးမှု နှင့်တ ဦး တည်း & # 8217t ကူညီပေမယ့်ရာသီ2ပြပွဲ & # 8217s နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိစိုးရိမ်ပူပန်နိုင်ပါတယ်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ထုတ်လုပ်မှုသည်အချို့သောအရှိန်အဟုန်ကိုထိမှန်နေချိန်တွင် Netflix သည်၎င်း၏အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်သောရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်သည့်ပြပွဲကိုအတော်လေးယုံကြည်မှုရှိပြီးထောက်ခံမှုရှိပုံရသည်။
နောက်တစ်ခု:Wynonna Earp၊ Survivor၊ Dash & amp လီလီ
WYNONNA EARP & # 8212 ဓာတ်ပုံ - Michelle Faye / Wynonna Earp Productions, Inc./Syfy & # 8212 NBC Media Village မှရရှိသောဓာတ်ပုံ။
ရာသီအရေအတွက် - လေး
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - မူလစီးရီးများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီဆိုလျှင်မူလပရိုဂရမ်၏ Syfy & # 8217s slate သည်အလျင်အမြန်ကျုံ့သွားသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Syfy သည်နောက်ထပ်စီးရီးများစွာနှင့်နှုတ်ဆက်ခဲ့သည် နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ် နှင့် Vagrant Queen, အသစ်တဖန်နေစဉ် ဗန်ဟယ်လင် နောက်ဆုံးရာသီအတွက်။ ဤမျှလောက်များစွာသောစီးရီးများအနီးကပ်မှလာ။ နှင့်အတူ, ငါတို့ & # 8217re ပြပွဲ & # 8217s အနာဂတ်နှင့်အတူအနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုထက်ပိုမိုဖြစ်လာဖို့စတင်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် Syfy & # 8217s မကြာသေးမီကရေးသားထားသောမူရင်းစာမူရှင်းလင်းခြင်းအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်လန့်သည်ဟုမဆိုပါကလိမ်လိမ့်မည် Wynonna Earp & # 8216s အချိန်ကန့်သတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာမှာကွန်ယက်သည်အခြားအချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်ပြုလုပ်သောနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုပြသလိမ့်မည်ဟုဖြစ်သည်။
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ: စစ်ပွဲမှာအနိုင်ရ။ ဓာတ်ပုံ။ Screen Grab / CBS ဖျော်ဖြေရေးနှင့် copy2020 CBS Broadcasting, Inc. အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ရာသီအရေအတွက် - ၄၀
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: သာမန်နှစ်တွင်၊ လွတ်မြောက်သူ CBS သည်ထုတ်လုပ်မှုသို့ပြန်သွားနိုင်ခြင်းကြောင့်နှစ် ၂၀ အတွင်းသမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျဆုံးခြင်းရာသီပျောက်ဆုံးသွားခြင်းကြောင့်အသစ်တဖန်ပြန်လည်အားဖြည့်ရန်အတွက်ခိုင်မာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် သော်လည်း လွတ်မြောက်သူ ထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်း၏အနာဂတ်မှာမသေချာမရေရာဖြစ်နေပြီး CBS သည်စီးရီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေဆဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ထုတ်လုပ်မှုသည်လုံခြုံစိတ်ချစွာပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ပါက၎င်းသည်ပြန်လာရန်အပြည့်အဝမျှော်လင့်သည်။
DASH နှင့် LILY (L မှ R သို့) MIDORI FRANCIS ၏ LILY အဖြစ် DASH နှင့် LILY Cr ၏ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀၂ ။ ၏ NETFLIX / NETFLIX & 2020 မိတ္တူ
ကျွန်ုပ်တို့ & rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသနည်း: ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလဆန်းတွင်ကျဆင်း Dash နှင့်လီလီ လျင်မြန်စွာပြီးပြည့်စုံအားလပ်ရက်အားရစရာအဖြစ်ပရိသတ်တွေအကြားထိခိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပရိသတ်များသည်ပြသမှုကိုအလျင်အမြန်ချစ်ခင်ကြပြီး Netflix သည်၎င်း၏အနာဂတ်နှင့် # 8212 ကိုကြည့်ရှုရန်နှေးကွေးခဲ့သည်။ Netflix သည်ပြသခြင်းပြတ်ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသက်တမ်းတိုးခြင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးလေ့ရှိသည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် အားလပ်ရက်စီးရီး don & # 8217t တွင်များစွာသောဒုတိယရာသီကိုတွေ့မြင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်များစွာသောအားဖြင့်အတွေ့အကြုံ, သို့သော်ကျနော်တို့ & # 8217re အကောင်းမြင် Dash နှင့်လီလီ ဒီစည်းမျဉ်းမှချွင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်တစ်ခု:Roswell, နယူးမက္ကစီကို, ကောင်းသောစုန်းမ,
Roswell, New Mexico & # 8212 & # 8220Pilot & # 8221 & # 8212 Image နံပါတ်: ROS101b_0272ra.jpg & # 8212 ပုံ (LR) - ဂျင်းနစ်မွန်းဆန်သည်လီဇ် Ortecho အဖြစ်နှင့်နာသန်ပါဆန်ဆန်မက်စ်အီဗန်နှင့် # 8212 ဓာတ်ပုံ - Ursula Coyote / The CW & # 8212 & Atilde & # 130 & Acirc & 2018 The CW Network, LLC မှကူးယူပါ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း CW စီးရီးများသည်ရာသီ ၁ နှင့် ၂ ကြားအကြားအဓိကတိုးမြှင့်မှုများကိုတွေ့မြင်ရပြီးပရိသတ်များနှင့် # 8217 ကြည့်ရှုသူ Netflix နှင့် # 8212 တွင်ပြသမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မြစ်ကြီးနား။ ကံမကောင်းစွာပဲ Roswell, နယူးမက္ကစီကို ကြည့်ရှုသူများနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ရာသီ ၂ တွင်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်။ ရာသီဥတုကြောင့်နွေရာသီအထိမရောက်ရှိနိုင်သည့်လာမည့်တတိယရာသီပြပွဲနှောင့်နှေးခြင်းကိုအထောက်အကူပြုခြင်းမရှိပေ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ၏အနာဂတ် Rosewell, နယူးမက္ကစီကို ဖွယ်ရှိပြပွဲ & # 8217s တတိယရာသီ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အကြီးအကျယ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်တိုးတက်မှုလက္ခဏာများပြသပါက CW သည်စတုတ္ထရာသီနှင့်အတူလက်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။ အကယ်၍ နံပါတ်များဆက်လက်ကျဆင်းမည်ဆိုပါကရာသီသုံးခုသည်နောက်ဆုံး၌ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - စဉ်တွင် ကောင်းသောစုန်းမ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက်ထုတ်ဝေမှုမှစတင်ကာ ၁၂ နှစ်တာကာလအတွင်း ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ကောင်းသောစုန်းမ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာဒီဂိမ်းကိုဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးခဲ့တာလဲ၊ အဆုံးရက်ကိုအလျင်အမြန်ချဉ်းကပ်လို့ရမယ်၊ နောက်ဆုံးရာသီ ratings ထိုနေ့ရက်သည်မကြာမီလာမည်ဟုယူဆပုံရသည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကကျဆင်းသွားခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါ ကောင်းသောစုန်းမ ပရိသတ်များအကြားတွင်ခိုင်မာသောသော့ချက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hallmark သည် ဆက်လက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်နေပုံရသည်။ ကြယ်ပွင့်ကက်သရင်းဘဲလ်ကသူ၏မှော်အလှကိုအဆုံးသတ်ရန်အချိန်မသတ်မှတ်ပါက Cassie Nightingale အနေဖြင့်စီးရီးရှစ်ရာသီကိုလုံခြုံအောင်စီမံနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးထားသည်။
ဓာတ်ပုံ - Penn Badgley in your season2.. Credit: Beth Dubber / Netflix
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - breakout series တွေထဲရောက်ရင် မင်း Netflix & # 8217s ထိပ်တန်းစီးရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် # 8217 အဖြစ်အပျက်များစွာဖြင့်လူကြိုက်များသောစီးရီးများနှင့်တွေ့ရစဉ် Netflix သည်မည်သည့်အခါကမျှကြောက်လန့်ခြင်းမရှိပါ ပရိတ်သတ်တွေက adored တစ်စီးရီးဖျက်သိမ်း အနည်းငယ်ဇာတ်ညွှန်းများမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစတုတ္ထရာသီကအောင်အတူ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ၎င်း၏အောင်မြင်မှုကြောင့် Netflix ကအဆုံးသတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုရှိသည် မင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းခြင်းသည်နောက်ဆုံးရာသီအမိန့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်တစ်ခု:Mr. Iglesias၊ နောက်ထပ်ဘဝ၊ Dirty John
မစ္စတာ။ MR ၏အပိုင်း (၁၁) တွင် JOAQUIN အဖြစ် IGLESIAS (L မှ R) GABRIEL IGLESIAS အဖြစ် GABE IGLESIAS၊ CICCHINO နှင့် FRANCO ESCAMILLA တို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ။ CR ။ ကီဗင် Estrada / NETFLIX & 2020 ကူးယူ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - ၂၀၂၀ သည် Netflix ၏မူလဇာတ်ညွှန်းများအတွက်ကြင်နာမှုအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ အက်ရှလေ Garcia နှင့် The Big Show Show မမျှော်လင့်ဘဲတံခါးကိုပြသလျက်ရှိသည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် Netflix သည်နာရီဝက်ကျော်သောဟာသဇာတ်ကားများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းမြင်သူများဖြစ်သည် Mr. Iglesias အသစ်သောဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့ချစ်ခဲ့တာသေချာတယ် The Big Show Show နှင့် အက်ရှလေ Garcia က ဒါပေမယ့်မအတိအကျကြောင်းကြယ်ပါဝါရှိခဲ့ပါတယ် Mr. Iglesias ရှိပါတယ်မဟုတ်သည့် buzz ။
ဓာတ်ပုံချေးငွေ - Netflix မီဒီယာစင်တာမှရရှိသောအခြားဘဝ / Netflix
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - ဒါဟာ & # 8217s မကြာခဏပရိတ်သတ်တွေသက်တမ်းတိုးအပေါ်တိုင်ကြားပေမယ့်အများအပြားက၎င်း၏သိပ္ပံဝတ္ထုစီးရီးမှဒုတိယရာသီအမိန့်ထုတ်ပေးရန် Netflix & # 8217s ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အတော်လေးအံ့သြသွားတယ် နောက်ထပ်ဘဝ ။ ပြသရန်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်အလွန်တောက်ပနေပြီး၎င်းသည် Netflix ပြပွဲတွင်အတိအကျအများဆုံးရရှိခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် စဉ်တွင် နောက်ထပ်ဘဝ ပထမရာသီအပြီးတွင်သေခြင်းနှင့်ပုဆိန်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။ ပြပွဲတွင်အလေးသာမှုအရှိန်အဝါနှင့် # 8217s သည်နောက်ဆုံးရာသီဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီးရာသီ ၂ နှင့်အသာရနိုင်သည်။
DIRTY JOHN & # 8212 (Isabella Vosmikova / USA Network မှဓာတ်ပုံ။ )
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် rsquore သည်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသနည်း - ရာသီ 1 ၏ ညစ်ပတ်ပေရေယောဟန် ယူအက်စ်ကွန်ယက်အတွက်အောင်မြင်သောအောင်မြင်မှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဒုတိယအကြိမ်ရာသီပြပွဲနှင့် # 8217s အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာအတူတူပင်ရိုင်းစိုင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည် # 8217t ဖြစ်သည်။
အပြီးသတ်စီရင်ချက် ရာသီ ၂ ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မည်မျှဆိုးဝါးစွာခံခဲ့ရသည်ကိုဖော်ပြပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်တတိယရာသီသည်ယူအက်စ်အေသို့မဟုတ်အခြားကွန်ယက်သို့လာမည်မဟုတ်ချေ။
နောက်တစ်ခု:၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် Netflix ၏ပြသနာများကိုဖျက်သိမ်းပြီးသက်တမ်းတိုးခဲ့သည် '>နောက်တစ်ခု 11 ၏ 10 Prev browse လုပ်ရန်သင်၏←→ (မြား) ကိုသုံးပါ
သူရဲကောင်းများပြန်လည်မွေးဖွားအတွက်ဖြစ် panettiere hayden ပါလိမ့်မယ်
ဘယ်အချိန်မှာနတ်ဆိုးလူသတ်သမားရာသီ2ထွက်လာမလဲ
လာသောအခါမှထွက်လာမယ့်3conjuring ဖြစ်ပါတယ်
Netflix အပေါ်ဝိဇ်ဇာဆရာတို့ရာသီ 4
နတ်ဆိုးကိုကွပ်မျက်တဲ့ရာသီ2ရှိသေး၏
Santa Clarita အစားအစာရာသီ 4